Muuqaal dunida xusuusiyey ma hadhooyin hore! - BBC News Somali
Muuqaal dunida xusuusiyey ma hadhooyin hore!
Image caption Sawir laga qaaday Isniintii Falastiini gacan calan ku haysta ta kalena wadhaf ku lalinaya
Waa sawir kun eray laga yidhi [oo lagu falanqeeyey baraha bulshadu ku xidhiidho ee internet-ka]. Sawirka waxa qaaday saxafi la yidhaa Mustafa Xassuuna, oo wuxu Isniintii Qasa kaga qaaday nin Falastiini ah oo feedho qaawan oo gacan ku haya calan, ta kale na ku lalinaya wadhaf.
Sawirka waxa la qaaday iyada oo ay socdaan mudaharaaddo rabshado wata oo ka dhacayey xeebta Qasa, meel u dhaw soohdinta Israel.
Dadka bannaan baxayey waxay gubayeen taayirro waxaanay shiidayeen xoogagga Israel oo iyaguna rasaas nool iyo sunta dadka kaga ilmaysiisa ku riday.
Wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa iyadna sheegtay in 32 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dhaawacay.
Maamulka Falastiiniyiinta iyo Xamaas oo lagu eedeeyey in ay maxaabiista jidh dilaan
Sawirkaa ayaa hadaba aad loogu baahiyey baraha bulshadu ku xidhiidho ee internet-ka, oo dadka qaarkood kuba sheegeen inuu u eeg yahay sawirka caanka ah ee uu sawiray farshaxankii Faransiika u dhashay ee la odhan jiray Eugene Delaacriox markii uu socday Kacaankii Faransiisku.
Sawirkaasi wuxu muujinayey gabadh lagu shabbahay xorriyadda oo iyada oo gaaddadeedu faydantahay hor kacaysa dadkii xorriyad doonka ahaa.
Image caption Sawirka gabadha xorriyadda lagu shabbahay ee hor kacaysa dadka xorriyad doonka ah waxa sawiray farshaxankii caanka ahaa ee Eugene Delacroix
Telefishanka Al-Jazeera ayaa ku sheegay ninka [Falastiiniga ah ee sawirka laga qaaday] inuu yahay Caa'id Abu Camruu oo labaatan jir ah.
Caa'id oo telefishanka la hadlay ayaa waxa uu yidhi "bannaan baxyada dhaca todobaadkiiba mar baan ka qayb galaa, mararka qaarkoodna in ka badan. Maba aan arkayn in goobta sawir qaade ii dhawaa joogay. Calanka aan sitaa waa ka aan mar kasta qaato, waxa aanan kaga qayb galay mudaharaadadii aan ku jiray oo dhan. Saaxiibaday baa igaga maadaysta oo waxay igu yidhaahdaan gacantaa aad calanka ku sidato dhagaxaad ku guran lahayd, laakiin waan la qabsaday oo ima dhibo".
Borofesoor Laleh Khalili, oo siyaasadda Bariga Dhexe ka dhigta kulliyada SOAS ee Jaamacadda London, ayaa boggeeda Twitter-ka soo dhigtay sawirkaa maalintii Salaasadii.
Sawirkaa ay Twitter-ka dhigtay iyo qoraalkii ay ku lifaaqday ayaa waxa ay soo jiiteen in ka badan 30,000 oo qof oo mar kale sii baahiyey iyo 80,000 oo qof oo muujiyey in ay la dhacsanyihiin oo ka heleen sawirka. Waxa kale oo intaa dheer in sawirkaa tobanaan kun oo faallo ah lagaga bixiyey bogga internet-ka ee lagu falanqeeyo sawirrada saxafiyiinta ee Reddit la yidhaa. Laakiin faalada laga bixiyey ma wada ahayn mid togan.
Waxa jiray dad ku tilmaamay sawirkaa mid noqday astaan dadka xasuusinaysa dhacdada ay diimaha qaarkood xusaan ee ah tii Nabi Daa'uud ku dilay Jaaluut oo ahaa nin aad uga xoog waynaa [ujeedada ay arintaa u carrab dhebayaanna tahay in cid awood isbidday aanay ka macaashin mitid dulman] laakiin waxa jiray dad kale oo ku tilmaamay sawirkaa muuqaal cunfiga muunaynaya.
Gabar yar oo reer Falastiin ah oo dharbaaxday askari Israa'iili ah oo xabsiga laga sii daayay
Falastiiniyiinta Qasa ku nool ayaa tan iyo bishii Maarij todobaad kasta maalin ka mudaharaadayey xadka ay la leeyihiin Israel. Banaanbaxyadaa waxa abaabula ururka mitidka ah ee Xamaas ee gacanta ku haya maamulka Qasa, waxaana looga gol leeyahay in lagu taageero xaqa qaxootiga Falastiinyiinta ahi u leeyihiin in ay ku noqdaan dhulkii awowyaashood oo haatan ah Israel.
Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay iyo wasaaradda caafimaadka ee maamulka Xamaas ee Qasa, ugu yaraan 217 qof oo Falastiiniyiin ah ayey ciidamada Israel ku dileen mudaharaadadaas tan iyo markii ay bilaabmeen, hal askari oo Israeli ah na waxa toogtay Falastiiniyiinta.
Israel waxa ay sheegtaa in xoogaggeedu rasaasta u furaan si ay iskaga difaacaan dadka ay u arkaan in ay yihiin kuwo weerar ku ah oo isku daya in ay u tallaabaan dhanka Israel iyaga oo iska dhigaya dad mudaharaadaya.